Sidina - Vaovaon'ny dia | Vaovao momba ny dia
Amin'ity fizarana ity dia hanana ny fampahalalana ilaina kokoa momba ny sidina. Raha tianao ny mandeha amin'ny toerana lavitra, dia mandeha amin'ny fiaramanidina zavatra ilaina tanteraka aminao izany.
Ahoana no ahitana ny sidina mora indrindra? Iza ireo torohevitra tsara indrindra rehefa mandeha fiaramanidina? Iza amin'ireo seranam-piaramanidina no tena atoro anao? Ireo lohahevitra ireo sy ny maro hafa dia ho hita eto.
Fampahalalana momba ny kalitao, natambatra ary navoakan'ny mpandehandeha manam-pahaizana manerantany.
Vaovao momba ny sidina farany
Amin'ity lisitra manaraka ity dia manana ny lahatsoratra farany momba ny sidina navoaka tao amin'ity tranonkala ity.
Coronavirus: Milamina ve ny mandeha fiaramanidina?
ny Luis Martinez hace 4 volana .
Raha mila manidina tsy tapaka ianao dia azo antoka fa efa nanontany tena ianao raha, miaraka amin'ny coronavirus, azo antoka ve ny mandeha ao ...
Te-hanidina foana ny olona ary ny marina dia ireo fotoana izay no anjarantsika, dia ...
ny Carmen Guillen hace 5 taona .
Imbetsaka aho no gaga amin'ireo olona manodidina ahy izay mahazo sidina mora vidy raha oharina amin'ny ...
Misy foana ny fotoana voalohany ho an'ny zava-drehetra ary ny sidina dia tsy ho ambany. Manome ny mety ho ...
ny Maria Jose Roldan hace 6 taona .
Angamba efa naheno ny teny hoe "fomba fijery maso" na "VMC" ianao ary tsy fantatrao hoe inona marina izany sa mety ho fantatrao ...
ny Fitsangatsanganana hace 6 taona .
Isan'andro dia mpandeha fiaramanidina marobe no misafidy ny hitondra kitapo tanana ihany amin'ny fotoana ...
ny Blog Aereoo hace 9 taona .
Ankehitriny rehefa tonga ny fararano, mpizahatany maro no manantena ny hanana fahafaha-mandeha amin'ny kaontinanta amerikana, izay ...
ny Blog Aereoo hace 12 taona .
Marina izany, ity fiaramanidina novokarin'ny NASA ity no fiaramanidina haingana indrindra eran'izao tontolo izao….
ny Fitsangatsanganana sy mpizahatany hace 13 taona .
Alohan'ny hanombohanao hitsangatsangana any Azia, ary hamandrika ny tapakilan'ny fiaramanidintsika dia tsara ny mahafantatra hoe inona ny ...